Ampidino Tools Rindrambaiko ho an'ny Windows
Ampidino Tools Rindrambaiko
Sintomy madio ny tompoko Clean Master dia mpanadio sy mamporisika solosaina maimaimpoana. Clean Master dia programa Windows miaraka amina endri-javatra lehibe toy ny mamafa ny tsy ilaina (fako) rakitra, manafaingana ny PC, mpanadio tsiambaratelo, fanarenana rakitra, fanavaozana ny fiara, fisie sisa tavela ho azy, mamafa ny rakitra sy ny...
Norton Ghost dia programa fandrindrana angon-drakitra mandroso aminny fiarovana sy fanohanana ny angon-drakitrao. Raha mila fotoana ny fametrahana programa sy mpamily aorianny fametahana ny rafitra fiasanny Windows anao dia azonao atao ny mampihena kely ny fotoana miaraka aminny programa Norton Ghost. Aminny alàlanny fampiasana ny...
Norton Removal Tool dia programa maimaimpoana maimaimpoana izay manampy anao hanala mora foana ny rindrambaiko Norton napetraka ao aminny solosainao. Manoro hevitra anao izahay hisafidy Add / Delete Programs alohanny hampiasana ity uninstaller ity, izay manohana ny rindrambaiko Norton 2014 ihany koa. Ny programa dia tsy mitaky...
FreeCommander XE dia safidy iray aminny Windows Explorer izay efa napetraka mialoha ao aminny rafitra fiasa Windows. Io no kinova fanavaozana sy fanavaozana ny programa FreeCommander. Noho ireo fiasa mandroso dia azonao atao ny miditra aminny lahatahiry tsy ilaozanireny rakitra ireny ary tsy miandry fotoana fikarohana lava. Misaotra ny...
Raha tianao ho voalamina ho azy ny rakitrao sy ny lahatahiry momba ny angona, dia noforonina ho anao ny DropIt, fampiharana kely dia kely nefa mahasoa. Rehefa mila mandamina ny fisieo ianao, ny sisa ataonao dia ny mampidina ny fisieo eo aminilay logo DropIt miandry mipetaka eo aminny efijeryo ary mijery ilay programa manao ny ambiny....
Raha ambany ny habaka kapila mafy azonao atao, dia azonao atao ny mampiasa ity rindranasa ity hahitanao sy hanadiovana ireo lahatahiry izay mivonto ny kapilao raha jerena indray mandeha. Ity rindranasa maimaimpoana ity, izay azo zahana aminny menio fanombohana na ny menio tsindrio havanana aminny alàlanny fampirimana rehetra, dia manisa...
Wise Program Uninstaller dia rindrambaiko manampy ny mpampiasa hamafa programa. Wise Program Uninstaller, izay uninstaller program izay azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana, dia rindrambaiko novolavolaina hanampiana anao hanala rindrambaiko izay manana olana aminny fanesorana aminny solosainao. Wise Program Uninstaller dia mety...
Defraggler dia programa fanalefahana rakitra rakitra maimaimpoana novokarini Piriform, mpanamboatra ny programa CCleaner fanadiovana ny rafitra malaza. Tsy toy ny defragger hafa, Defraggler dia mamela anao hanambatra afa-tsy ireo lahatahiry nofaritanao. Noho izany dia tsy mandany fotoana aminny fandotoana ny kapila manontolo ianao. ...
Raha tsy mampaninona anao ny mandoa rindrambaiko lafo vidy toa ny Photoshop hampiasaina aminny fanovana sary, ny GIMP dia ho fandaharana fanovana sary tadiavinao fotsiny. Ny GIMP, na ny GNU Image Manipulation Program, dia misy fiasa mandroso maro izay manavaka azy aminny tonian-dahatsary mahazatra, ary koa manampy anao hanao asa...
Rehefa maka tahaka na mamindra rakitra aminny solosaintsika dia mety maharitra ela ity dingana ity, ary mety hiteraka fahasosorana. Aminny tranga toy izany, ny programa TeraCopy, izay novolavolaina niaraka taminny fifantohana aminilay lohahevitra, dia manome tombony betsaka antsika aminny alàlanny fanamafisana ny hafainganam-pandehanny...
Auslogics Disk Defrag dia programa maimaimpoana sy haingana ary mahomby izay afaka mampihena ny volanny hard disk aminny alàlanny rafitra fisie FAT 16, FAT 32 ary NTFS. Auslogics Disk Defrag, izay rindranasa izay azo ampiasaina mora foana aminny alalànny mpampiasa azy ary miasa haingana be noho ny defragmenter disk izay tonga ao aminny...
IObit Smart Defrag dia programa fanalefahana kapila maimaimpoana izay manampy ny mpampiasa hahazo fahombiazana avo indrindra avy aminny kapila mafy ampiarahany aminny solosainizy ireo ary misy lafin-javatra fanampiny ilaina ho anny haingam-pandeha, fanatsarana ary fikojakojana ny solosaina. Raha mitady programa defragmentation kapila...
Recuva dia programa fanarenana rakitra maimaim-poana izay anisanireo mpanampy lehibe indrindra aminny mpampiasa aminny famerenana aminny laoniny ireo rakitra voafafa ao aminny solosainao. Ho anny safidy tsara kokoa sy feno kokoa dia azonao atao ny manandrana avy hatrany ny EaseUS Data Recovery. EaseUS Data Recovery Le Magicien, izay efa...
Mora dia mora ny mamafa ny rakitra sy lahatahiry izay tsy azo hamafana aminny Unlocker! Rehefa manandrana mamafa ny fisie na ny fampirimana aminny solo-sainanao Windows ianao dia Tsy azo tanterahina ity hetsika ity satria misokatra aminny fisie hafa ny fisie na ny fisie. Akatony ny folder ary andramo indray sns. Fandaharana azonao...
LightShot dia fitaovana fakana sary maimaimpoana. Ny programa dia tena mora sy tsotra ampiasaina. Ny faritra voafidinao aminny biraonao ihany no azonao alaina sary, na azonao atao sary ny pejy iray manontolo. Azonao atao ny maka tahaka ilay pikantsary voasambotra, tehirizo anaty rakitra nofaritanao, na amboarinao aminny mpamoaka sary...
iBeesoft Data Recovery dia programa fanarenana data azo antoka 100% miaraka aminireo mpampiasa an-tapitrisany. Izy io dia programa fanarenana data izay manampy ny mpampiasa hamerina rakitra very / voafafa avy aminny HDD / SSD, karatra fahatsiarovana, kapila RAW, kapila USB ary fitaovana fitehirizana hafa. Rindrambaiko fanarenana angona...
Avast AntiTrack dia programa fanakanana tracker izay manara-maso anao aminny Internet ary mipoitra doka mifandraika aminizany. Avast AntiTrack Premium, fampiharana tsiambaratelo natao hiarovana aminny teknika fanarahan-dia an-tserasera farany sy hiarovana ny fiainanao manokana momba ny rafitra, dia mampiditra fampahalalana sandoka ao...
Avast Driver Updater dia programa fanavaozana mpamily mandeha ho azy ho anny solosaina Windows. Aminny tsindry iray dia afaka mahita mora foana ireo mpamily ilaina aminny mpanonta ianao, scanner, fakantsary, mpandahateny, fitendry, modem ary fitaovana hafa. Avast Driver Updater dia mahatsikaritra mpamily efa lany andro, mpanao kolikoly,...
PC Booster Plus dia fitaovana fanafainganana rafitra izay azonao ampiasaina aminny solosainao birao. Miaraka aminilay rindranasa, izay tena tsotra ampiasaina, azonao atao ny mamerina ny solo-sainanao taloha aminny hafainganam-pandehany taloha. PC Booster Plus, izay manana fampiasana tsotra, dia mamela anao hiditra an-tsehatra sy...
Secure File Deleter no programa fanesorana rakitra azo antoka izay heveriko fa mila ny mpampiasa Windows rehetra. Manadio ny atinny rakitra alefanao ao aminny fitoeram-bokatra izy io ary hamafa na hamafa mivantana, ary hanova azy ireo ho endrika tsy azo averina aminny programa fanarenana rakitra. Miaraka aminny programa famafana rakitra...
SecretFolder dia rindrambaiko mahasoa sy azo antoka natao hialokaloka ny lahatahiry izay tsy tianao hidirana ny atiny manokana. Azonao atao ny misafidy mora foana ireo lahatahiry tianao hamboarina aminny alàlanny bokotra manampy na ny fomba fitarihana sy fitetezana. Aorianizay dia afaka mamaha mora foana ireo lahatahiry natahoranao...
Microsoft Visual C ++ 2005 dia fonosana iray mampivondrona ireo tranomboky Visual C ++ ilainny rindranasa, programa, lalao ary serivisy mitovy aminizany novolavolaina taminny fiteny fandaharana Microsoft Visual C ++ anny Microsoft. Misy karazany roa ny fonosana, ny anaranny anglisy dia ny Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable...
Ny fonosana Microsoft Visual C ++ Redistributable ho anny Visual Studio 2015, 2017, ary 2019 dia fonosana azonao ampiasaina hampandehanana programa, fampiharana ary serivisy toy ny lalao voasoratra aminny fampiasana ny fiteny fandaharana. Ny fonosana dia misy ny famakiam-boky ilainireo serivisy ireo. Ny anaranny fonosana aminny teny...
.NET Framework 3.5 dia nanisy fiasa vaovao aminny kinova .NET Framework 3.0. Ohatra, ny endri-javatra misy ao aminny Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF), ary Windows CardSpace. Ho fanampinizany, ny .NET Framework 3.5 dia ahitana fiasa vaovao aminny faritra...
Ny fanavaozana SP3 dia novolavolaina ho anireo mpampiasa izay tsy afaka mahafoy ny Microsoft Windows XP ary mampiasa XP aminny teny Tiorka. Raha te hitazona ny XP-nao ho azo antoka kokoa sy vaovao ianao, dia ampirisihinay hampiasa ny fonosana serivisy faha-3. Ny XP anao izao dia ho havaozina kokoa ary tsy ho diso aminny SP3, izay...
නව පරම්පරාවේ අන්තර්ජාල මෘදුකාංග සඳහා ශක්තිමත් අඩිතාලමක් දැමීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද .NET Framework 4 සමඟ උසස් තත්ත්වයේ යෙදුම් සකස් කළ හැකිය. නව අනුවාදය පැරණි අනුවාදයන්ට වඩා වෙනස් වන්නේ කර්මාන්ත ප්‍රමිතීන්ට සහය දැක්වීම, වැඩි භාෂා භාවිතා කිරීමේ වාසිය සහ එය ලබා දෙන ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වය ය. වැදගත්! මෘදුකාංග සංවර්ධකයින් සඳහා යෙදුම් සහ පුස්තකාල...
Ny programa PuTTY dia iray aminireo loharano misokatra sy programa maimaim-poana izay azonireo mpampiasa te hampifandray aminny terminal azy ireo. Marihina fa izy io dia iray aminireo fandaharana ankafiziny indrindra aminny sehatra misy azy, noho ny fanohanany serivisy sy ny firafitra azo namboarina. Andao hotanisaina fohifohy ireo...
Hamachi dia vahaolana teknolojianny tambajotra ilaina izay mamela ny mpampiasa hametraka tambajotra virtoaly azo antoka aminny Internet, ka mody mifanerasera aminny tambajotra mitovy. Rehefa mihazakazaka voalohany ny programa ianao aorianny fametrahana azy aminny solosainao, mety ho elaela vao hosokafana izany, fa aza matahotra satria...
Advanced SystemCare Ultimate dia fitaovana fiarovana sy fampisehoana PC mahery sy feno. Izy io dia ahafahanao manadio, manatsara ary manafaingana ny PC, ary miaro ny rafitrao aminny virus, ransomware ary malware hafa. Advanced SystemCare Ultimate 13 dia iray aminireo programa tsy maintsy ananana aminny solosaina Windows izay miadana...
CPU-Z dia fitaovana rafitra maimaimpoana izay manome anao fampahalalana aminny antsipiriany momba ny fikirakirana ny solosainao, ny motherboard ary ny fitadidianao. Sintomy ny CPU-Z Ny programa izay mampiseho anao ny hafaingananny fikirakiranao, ny hafainganam-pandehanny famantaranandro anatiny sy ivelany, ny karazana, ny maodely, ny...
SMPlayer dia iray aminireo fandaharana famerenana horonantsary malaza indrindra tato ho ato, ary azoko lazaina fa manatanteraka ny tanjony aminny fomba mahomby aminny asa maro izy io. Ilay programa, izay hita fa mpilalao haino aman-jery maimaim-poana, dia ho ampy hanomezana izay ilainny mpampiasa noho ny fampiasana mahomby ny...
MiniTool Photo Recovery dia programa fanarenana rakitra azonao ampiasaina hanarenana ireo rakitra voafafa avy aminny fakantsary nomerika na solosainao na inona na inona antony. MiniTool Photo Recovery, izay programa fanarenana sary voafafa izay azonao sintonina sy ampiasaina maimaim-poana aminny solosainao, dia manolotra fampiasana azo...
PC Win Booster dia fitaovana fikolokoloana rafitra mahomby izay manara-maso ny solosainanao, manamboatra izay olana hitany ary mamafa ireo rakitra tsy misy dikany. Ny programa dia afaka mamafa ireo rakitra efa lany andro, manimba ary tsy ampiasaina ho anao, mamorona backup misy rafitra ary maro hafa ho anao. PC Win Booster, izay azonao...
IObit Unlocker dia programa kely sy mahasoa izay mamela anao hamafa ireo rakitrao sy ny lahatahiry izay ezahinao hamafana nefa miziriziry tsy ho voafafa. Ny programa manala ireo hafatra diso «Tsy afaka mamafa ny rakitra», «Access Denied», «Ity rakitra ity dia ampiasainny programa hafa» dia aminny fomba fiasa- mitovy aminny Unlocker. ...
EaseUS Partition Master Free dia programa Windows maimaimpoana mamela ny fizarazarana, fanadiovana, fandotoana, fanaovana klona, ​​famolavolana HDD, SSDs, kapila USB, karatra fahatsiarovana ary fitaovana hafa azo esorina. Miaraka aminny EaseUS Partition Master Free, programa fizarazaran-kapila izay manolotra fampiasana tsy misy olana...
IsoBuster dia rindrambaiko fanarenana angona CD, DVD, BD ary HD DVD izay miasa ihany koa aminny famaritana fitaovana ambany. Manohana ireo rakitra rehetra. Jereo ny rakitrao sy ny lahatahiry very. Izy io koa dia mizaha ny CD, DVD, BD ary HD DVD. Ny programa koa dia manohana ireo endrika kapila optika rehetra afa-tsy ireo endrika...
GameGain dia fitaovana fanatsarana izay manatsara ny solosainao hahafahanao milalao lalao tsara sy milamina kokoa. Miaraka aminny GameGain, izay novolavolaina mba hampitomboana ny fampisehoana lalao, dia afaka milalao ny lalaoo ianao izao nefa tsy manelingelina ny solosainao. Raha milalao lalao aminny solosainao miadana ianao ary tsy...
Text Editor Pro dia fitaovana fanovana lahatsoratra mahery vaika izay miaraka aminny syntax manasongadina ny fanohananny fiteny sy ny script maro. Text Editor Pro (teo aloha EditBone) dia manome safidy aminny safidy mihoatra ny 100 hanomezana hoditra efa vonona 100, sarintanin-tsoratra Unicode, fitaovana fanovana tarehimarika isa,...
Advanced Renamer dia rindranasa Windows hamerenana anarana anarana rakitra marobe indray mandeha. Ho fanampinizay, ny programa dia mamela anao hamindra mora foana ireo rakitrao na lahatahiry ao anaty fampirimana tadiavinao, noho ny fandaminana madio sy voalamina tsara. Raha mila manome anarana ny rakitra na lahatahiry aminny ankapobeny...
CCleaner dia programa fanatsarana sy fiarovana rafitra mahomby izay mahavita manadio PC, manafaingana ny solosaina, manala ny programa, manafoana ny fisie, manadio ny rezistra, manafoana maharitra ary maro hafa. Ny mpampiasa Windows PC dia omena kinova roa, CCleaner Free (Free) ary CCleaner Professional (Pro). Ny kinova CCleaner...
Rufus dia programa kely, tsotra ampiasaina ary maimaim-poana izay manampy anao mamorona kapila USB azo soloina. Matetika ianao mety mila anio raha: Namolavola ny solosainao ianao ary hametraka ny rafitra ampiasainao aminny alàlanny fahatsiarovana USB miaraka aminny fanampianny rakitra sary ISO. Raha mila miasa aminny solosaina ianao...
IObit Driver Booster 8 dia programa maimaimpoana ahafahana mahita mpamily, manavao ny mpamily ary mametraka mpamily tsy misy Internet. Fitaovana maimaimpoana voaomana ho antsika io mba hialantsika aminireo olana fanavaozana ny mpamily izay matetika sendra antsika aminny solosainantsika Windows, ary navoakanny IObit, orinasa iray efa...
Wise Memory Optimizer dia fampiharana maimaim-poana sy ilaina natao hanadio ny enta-mavesatra fitadidiana ny rafitrao mba hampitomboana ny fahombiazanny rafitrao. Tsy maninona na matihanina ianao na mpampiasa solosaina tsy miankina. Noho ny interface tsotra anny Wise Memory Optimizer dia azonao ampiasaina mora foana ilay programa. Eo...
IObit Uninstaller dia uninstaller izay azonao ampiasaina raha tsy mila kaody lisansa. Izy io dia anisanireo fitaovana maimaim-poana izay azonny mpampiasa Windows PC ampiasaina hanatanterahana ny fikolokoloana solosaina sy ny fanalana ny programa ho mora kokoa sy haingana kokoa. Windows 10 dia ampiasaina mba hanafoanana ny...
Ny rindrambaiko fanarenana horonantsary nomerika dia ahafahanao manamboatra ireo rakitrao efa simba ao anatinny tsindry vitsivitsy fotsiny. Rehefa mamerina horonantsary avy amina fitaovana simba ianao na averina amina horonantsary voafafa dia mety hahasosotra sy mahasosotra tokoa ny mahita fa simba ilay rakitra. Raha misy...